Shabakada baraawecity.wordpess.com oo lagu xiray inuu islaamka u shaqeeyo iyo war bixin kooban | Halganka Online
Shabakada baraawecity.wordpess.com oo lagu xiray inuu islaamka u shaqeeyo iyo war bixin kooban
Posted on Agoosto 16, 2009 by halganka
Aqristayaasheena ku xirnaa webka baraawecity.wordpress.com in webkii ay gaalada soo weerareen ka dib markii lagu soo eedeeye inuu u shaqeeyo muslimiinta dunida ku kala sugan ay weerar toos ah ku soo qaadeen.
mudooyinkii u danbeeye waxaa saliibiyiinta dagaal jihaad ah oo dunida dhamaan looga adkaadey iyagoo u adeegsadey hubka noocyadiisa kala duwan uguna casrisan hubkaas oo in badan ka mid ah muslimiinta lagu tijaabiye iyadoo wadama ciraaq iyo afghanistaan lagu tijaabiye hadana loo adeegsanaayo shacabka soomaaliyeed ka dib markii murtad shariif kula soo kulmay habarta gaasha arimaha dibada ugu qaabilsan saliibiyiinta marekanka.
Hillary clinton ayaa U Balan Qaadey murtad shariif Inay ka caawinayso xaga militariga iyo dhaqaalo, murtad shariif ayaa isagana balan qaadey arimihii laga wada hadlay ee ahaa in wadanka dowlad islaami ah uusan marnaba ka hir galin islaamiyiintana uu dagaal kala hor yimaado iyadoo hubkaas lagu gumaadaayo shacabka soomaaliyeed oo ayaga hada ay u adeegsadaan kuwooda ugu casrisan inay ku gumaadaan muslimiinta dunida ku kala nool.
warar xaqiiqa ah oo aan ka helnay Wasiir Ku xigeen ka tirsan dowlada ridada oo aan ka gaabsanay inaan magaciisa halkaan ku xusno kana mid ahaan jiray mas’uul ka tirsanaa maxkamadaha ee ku biiray dowlada ridada ayaa shabakada halganka.wordpress.com u xaqiijiyay inaysan gacantooda waxba ku jirin ay wadanka maamulaan saliiibiyiinta AMISOM.
Duulaanka saliibiyiinta reer galbeedka ku haayaan muslimiinta maahan mid dunida ku cusub waqti badan ayuu soo socdey lakaiin waxaa waqtigaan muslimiinta iyo mujaahidiinta guulo badan ka keeneen wadamo badan oo muslimiinta ka mid ah.
waxaa duulaanada reer galbeedka dagaalka ku haayaan ka mid ah muslimiinta lagu soo qaadey inay warbaahinada iyo dhan walboo isgaarsiin ah laga xiro si aan loo arag loona maqal guulaha mujaahidiinta ay gaareen.
marekanka iyo xulafadiisa maka salgaareen danahii ay ka lahaayeen dunida muslimka oo ma u suura gashay,dabcan maya oo hada waxayba taaganyahiin qaabka ay uga bixi lahaayeen wadamada ay ku soo duuleen waxaa ku yimid fashil aysan waligoodaba filanayn walilahil xamd.
waxaana la yaab lahayn ama uusan ugu horeyn nin muslim sheeganaaye hadana ahaa hogaamiye dowladii islaamka ee 6 bilood ee maxkamadaha ahaa inuu maanta u gacan qaado habar gaal iyadoo oo khaanziir ku soo kortay laguna soo barbaariye akhlaaq xumo wal ciyaadu billah.
ugu danbayn waxaan walaalaha muslimiinta aqoontooda sareeso mid wax qora ku difaac muslimiinta iyo mid yaqaanaba aqoonta casriga af iyo adinba inaysan ka daalin inay u shaqeeyaan walaalahooda muslimiinta meel walba ay dunida ka joogaan.
« Maqaal:: Soomaaliya tageerid iyo u gargaarid W/Q:-(C/WAAXID KHALIIF) Goormuu Zenawi Noqday Sheekha Ijaazada Siiya Ehlu Sunnaha? »
axmed modowe, on Seteembar 13, 2010 at 4:22 g said:
qaraxgii darad uga dambeeyey gaalada laqar xiyee aad ayaan uga farax sanahay sxb gaala alaha jibiyo sxb ayaan leenahay sxb tak biir alaah u ak bar sxb ala shabaab juu ayaan leeyahay asalaama caley kum sxb mu jaahidiineey